Kwimpilo yabo bonke abesetyhini, kukho amaxesha apho yonke into ibonakala iluhlaza kwaye iphosa ngesizathu esithile. Umsebenzi uyamkhathaza, iimvakalelo ziba nzima, kwaye uqala ukungaqiniseki ukuba uvakalelwa njani.
Uxinzelelo luhamba kunye nentloko kwaye kuya kuba lunqweneleka ukuba luphele emhlabeni wonke. Ingxaki kukuba akukho ndawo. Ngoko ke emsebenzini wonke into iya kuhlaselwa, kwimpikiswano ehlala ekhaya. Indoda ecaleni kwentloko yayo yaphuka ekukhangekeni impendulo, into oyifunayo. Kodwa kuzo zonke izinto ezinjolisayo kunye nobuchule obunokuthi uzive ... akukho mntu.
Ingxaki yesiqingatha esilungileyo sobuntu ngokuchanekileyo kukuba yinto enhle, ngoko kufuneka ihlaziywe njengento enhle njengoko kunjalo. Inkathazo yobuhle ifika kungekudala okanye kamva ebomini yintombi okanye intombazana. Inyaniso kukuba, nangona singatshatanga, sihamba kunye nabahlobo kwimiboniso, iminyuziyamu kunye neefriji, njl. Kodwa ukuba umfazi eshada, uluhlu oluphuthumayo lwamatyala luvela ngokukhawuleza, ngenxa yezinto ezintle ezingabonakaliyo. Ewe, kwaye phakathi kwamadoda awunakufumana amaqonga obuhle. Baya kuba bhetele ukusebenzisa imali baze baye kwivenkile yokudlela, okanye baya kuthenga amathayi amatsha emotweni, "kulungile," bafilosofi. Kodwa, kule nkalo, amadoda angalunganga, ukuba bayeka ukunondla intyatyambo yabo, umfazi, amanzi kunye nezichumiso, ngokukhawuleza uyawususa.
Ukuba umntu wakho akayena uluhlu lwabameleli besondo esomeleleyo abangaphambuki ukuya kwigalari okanye kwimiboniso yeefoto, ngoko ke kufuneka nicinge ngokuphathelele indima yobuhle behlabathi elijikelezayo ebomini babo bonke abesifazana. Ngoko, yenza isicwangciso, apho uhambela khona kwaye ngokubanzi ukuba wenzeni ukudibanisa nehle.
1. Kubalulekile ukutyelela iminyuziyamu, imibukiso nemiboniso. Akuxhomekeke ekubeni ingafaki, ifanethi okanye idume, kufuneka ugxininise kwiimfuno zangaphakathi, kungekhona ngelizwi elifanayo. Unako ukuya kumyuziyam wezakhiwo zendawo, ngaphandle kokusebenza ngokuzungeze ngokupheleleyo, ukuhlola izinto ezinomdla kakhulu, kwaye ekhaya ukhangele ulwazi olongezelelweyo. Inqwenela yakho iya kuqeqesha imemori yakho kwaye ibe ngumqhubi wokuziphucula.
2. Kubaluleke kakhulu ukufunda iiklasi. Into eyona nto kukukunqoba izinto ezingabonakaliyo, ezithandekayo kwaye ezingathandekiyo. Emva koko, bafakwe kuthi esikolweni, kuba siyanyanzelekile ukuba sifunde, kwaye yonke into ephoqelelwe ukuba yenze ngokunyanisekileyo ibhekwa ingathandeki. Kwaye ngokubanzi iimbono ziphosakeleyo ukuba i-classical imayelana nemiba ephezulu kunye nezinye izinto ezingenangqondo. Olu ncwadi lubhekiselele kwiimvakalelo, ubudlelwane babantu, malunga namava kunye neengcamango ezahlukahlukeneyo.
3. Akuyimfuneko ukucinga ukuba into enhle ifihliwe kwiigalari kunye nakwiimyuziyam, kunye namanqaku okuhle angabonakala kwimimandla yasezidolophini.
Ngexesha elidlulileyo umculi, ebona umfazi omdala owayengummangaliso kwinqwelo yokukhwabanisa. Kungenxa yokuba xa ephendukela kuye - ezandleni zakhe kwakukho amanqaku, endala kunye ne-shabby, umntu owakhupha ngaphandle. Le meko yabangela ukutshatyalaliswa ngokungathandabuzekiyo, kuba iziganeko zabantu abalule ndawo ziye zaphuhliswa, kodwa izenzo ezingalindelekanga zidukisa. Yenza ucinge kwakhona ubomi bakho bonke. Ngako oko, akufanele ucinge ngendlela efanelekileyo kwaye ukhangele ubuhle kuphela kwiindawo ezikhethiweyo.
4. Ukuhamba malunga nomzi wasekuhlaleni, cwangcisa uhlobo lweebhononi, oko kukuthi, khumbula ukuba yintoni na oye yabona enhle. Ingaba sisikhumbuzo, kwaye mhlawumbi isikwere esiqhelekileyo, konke kuxhomekeke kumandla wengcinga yakho. Ukudibanisa okukhulu kunye nentlonelo kuwe owaziyo ubuninzi bezakhiwo zobugcisa bezakhiwo ezikhoyo kwisixeko sakho. Kwaye ukuba ungayazi, hamba uye kutyelela kwidolophu yasekuhlaleni. Kuyavakala, ewe, kungekho nto, kodwa uya kumangaliswa kwinani lamabali, iimfihlakalo ezifihla izindonga zesixeko. Kwaye kubaluleke kakhulu, ungabonisa ulwazi lwakho ukuba iindwendwe ezivela kwelinye idolophu ziza kuwe, ziyamangalisa ngomthwalo woluvo lwabo.
5. Ukubuyela ekhaya, akudingeki ukhethe indlela, endleleni oyaziyo ngayo bonke abadlulileyo kunye nayo yonke ingqungquthela endleleni, bakhethe into entsha kunye neyinkimbinkimbi.
6. Endleleni eya ekhaya, ungaboni kuphela kwiindawo ezintle kunye neendawo zokuzakhela, uontanga kubantu. Thatha umyalelo wokuba ungabizi abantu ababi, kungekhona ukukhangela iimpazamo, kuba akukho ndawo kwaye zonke ziphosakele. Kwakhona kuwo wonke umntu kukho into ekhethekileyo, enhle kakhulu. Zama ukufumana oku kwaye ujonge ubuhle bamehlo omntu ongeyena okhangayo.
7. Musa ukulibala, elona lihle kakhulu, yile nto yendalo eyenziwe. Namela inguqu esibhakabhakeni ngaphambi kokuba imvula ... Khumbula indlela ebuntwaneni ongaphumelela ngayo kwimifudumala efudumeleyo kwaye ufumane uvuyo oluninzi. Ukukhumbula le meko yelizwe, ngokukhawuleza uza kufunda indlela yokubuyiselwa ngayo, buyisele kububuntwaneni.
Yaye ukuba zonke ezi ngongoma ziphefumulelwe okanye zinyanzeliswe ukuba ziphefumle kunye nobuhle behlabathi elijikelezile, ngoko kufuneka ziqinisekise iingongoma zeengxaki ezingezantsi.
Ihlelo lobuhle kunye nokusilela kwayo
Ngelishwa, indima yobuhle behlabathi elijikelezile ebomini yowesifazane sele ithetha intsingiselo eyahlukileyo namhlanje kunaphambili. Ngenxa yeengcamango eziphosakeleyo, ubuqhetseba buhle buphumelele kuluntu. Ukutyelela imihla ngemihla kwiimpawu ze-gyms kunye nobuhle be-salon kuye kwaba yinto eqhelekileyo kubasetyhini banamhlanje. Sizungezwe ngamabhinqa amahle, ahlambulukileyo, kodwa ngelo xesha, bona, kunye nabo bonke abantu behlabathi, bafumana ukungabikho kokuphazamiseka kwengqondo, ukuncipha kobuhle bokomoya. Emva kwakho konke, ukuba ubeka ukhetho phambi kwowesifazane, uye kwigalari okanye uye kwindawo yokuthenga, akayi kunqikaza ukhetho lokugqibela.
Kukho, okwenene, ukhetho lwesibini, olubonisa ukuba abafazi abaziniki ixesha lokuba nobuhle, kuba abanalo ixesha elaneleyo kunye nemali yokunyuka kwiimyuziyam kunye nemibukiso. Kodwa, ngelishwa, nokuba le nyaniso ayinakulungelelanisa nabani na, kuba akukho bani owenqabela ukufunda iincwadi zakudala okanye ukuhamba ngokuhlwa. Khumbula ubuncinane umbongozi othi, xa behlala kwiidolophana, bafumana ixesha lokudala, abazange bafunde nje, bayidale, ukuze namhlanje sizungezwe ngobuhle.
Ngobugcisa benkcubeko, nangona kunjalo, umbono wobuhle uphazamiseka, nangona singabandakanyi nto yokuba namhlanje ayilwanga. Yenza! Kwaye asiyi kwamkela kwiimeko ezininzi ngokucokisekileyo ngenxa yokucinga, kodwa ukuba uthanda ukuba ngabaphi abaculi banamhlanje abapende kwaye babhale iietekisi, musa ukuzihlambalaza. Kuthetha nje ukuba unobomi bakho.
Indlela yokuziphatha kwiqela ukuze uphumelele
Ungamthinta njani umfana ofuna ukutshata naye
Ndiyamthanda indoda esatshatileyo
Ungayisebenzisa njani ixesha lakho lokukhulula kunye nomthandi wakho?
Ukutya kwiprotheni: i-pros and cons
Yenza ngendlela yesiGrike
Ikhukhi "I-Cottage Cheese"
I-recipe ehleko: i-pancake kunye nomango we-puree
Amabhisikidi enesimo senhliziyo eneshokolethi emhlophe
Indawo yeeholide kunye nabahlobo
U-Valery Leontiev akazange abonwe eMiami kwaye waphoswa yiLaima Vaikule
I-apricot pie kwimvubelo
Iipropathi zokwelapha zeemveliso zobisi ezenziwe
Indlela yokwenza ngokufanelekileyo nangokukhawuleza ukufundisa umntwana ukuba abhale kakuhle
Ukutshatyalaliswa komntu othandekayo
U-Jessner ubhekisa: ubungqina, ubunzulu benkqubo, inzuzo kunye neengxaki